XyBo: ဘီသွေးပိုင်ရှင်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့်သူ
This entry was posted on Sunday, August 17, 2008 and is filed under လူ့စရိုက် . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
ကိုကိုရေ...ဘီနဲ့ အိုကတော့ ကွက်တိဘဲကွာ..ဟဲဟဲ..ဟုတ်တယ်ဟုတ်..
ကောင်းမှကောင်းဗျာ...။ အင်း.. ဒါလဲ မှတ်သားစရာ တစ်ခုပဲ။ သိုင်းကျူး ဗျို့.....။
ဘီနဲ့ အေဘီကတော့ ကွက်တိပဲ.. :D
ပြောတော့ ပြောချင်တာဘဲ။ သူသွေးအမျိုးအစားမသိ တော့တော်တော်ခက်တယ်ဗျို့